Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်)
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း, နာကျင်ခြင်း, ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲနာကျင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခြင်း တို့အတွက် သုံးပါတယ်။ NSAID လို့ခေါ်တဲ့ စတီးရွှိုက်မပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အရောင်ကျဆေးအုပ်စုထဲမှာ ပါပါတယ်။
Celecoxib စီလီကိုဆစ်ဘ် ဟာ နာကျင်ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပြီး ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းလို နာတာရှည်ရောဂါကိုကုသဖို့ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကို တခြားဆေးတစ်မျိုးမျိုး ထပ်မံမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ prostaglandin ပရိုစတာဂလန်ဒင် ခေါ် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုလုပ်ပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းကိုပိတ်တာပါ။ prostaglandin တွေနည်းသွားရင် နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ ဂေါက်ရောဂါမှာလည်း သုံးတတ်ပါတယ်။
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ညွှန်သည့်အတိုင်းသောက်ပါ၊ တစ်ရက် တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထိခိုက်မှုနည်းအောင် အစာနဲ့သောက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ဆေးပမာဏက ရောဂါအခြေအနေ၊ ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးအာနိသင်ရနိုင်တဲ့ ပမာဏမှစသောက်ပြီး ညွှန်းဆိုသည့်အချိန်တိုင်းသာ သောက်ပါ။
ရေတစ်ဖန်ခွက်အပြည့်နဲ့သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီးပြီးချင်း ၁၀ မိနစ်အတွင်း မလှဲပါနဲ့ဦး။
အဆစ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့အခြေအနေအတွက် နှစ်ပတ်လောက်ပုံမှန်သောက်မှ လိုချင်တဲ့အာနိသင်အပြည့် ရပါလိမ့်မယ်။
နာကျင်မှသောက်ဖို့ ညွှန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ နာကျင်မှုစကတည်းကသောက်သင့်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာချိန်မှသောက်ပါက လိုအပ်သလို အာနိသင်မပြနိုင်တော့ပါဘူး။
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
နှလုံးခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင်၊ ပြီးလျှင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
ထိုဆေးဟာ နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်အဖွဲ့အစည်းကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ် (အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာသုံးပါက)
အစာအိမ်နဲ့ အူတို့မှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သွေးယိုခြင်း၊ အချဉ်ပေါက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသူတွေမှာပိုအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။
တကယ်လို့ celecoxib နဲ့ဆေးမတည့်ပါက သို့မဟုတ် aspirin ၊ ဆာလဖာပါသောဆေး ၊ တခြား NSAIDs တို့ နဲ့မတည့်ပါက မသောက်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေချာလေ့လာထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ချိန်ဆကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့သေချာအရင်တိုင်ပင်ပါ။ FDA အရတော့ ကိုယ်ဝန်သည်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားမှာ C အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ မောခြင်း၊ စကားများဝါးခြင်း၊ အမြင်အာရုံ ဟန်ချက်နှင့်ပတ်သတ်လို့ ပြဿနာများပေါ်လာခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်မကောင်းခြင်း၊ ယားခြင်း၊ စားချင်သောက်ချင်စိတ်နည်းခြင်း၊ ဝမ်းမည်းခြင်း၊ ဆီးမည်းခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ယားဖုများပေါက်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကျင်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း
အရေပြားတုံ့ပြန်မှုများ- ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ လျှာများ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်လုံးများပူစပ်ခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ အရေပြားတွင် အနီရောင် ခရမ်းရောင်ယားဖုများပေါ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုများပေါက်ခြင်း၊ အရေခွံများလန်ခြင်း
ဗိုက်မကောင်းခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ လေပွခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
တချို့သောဆေးတွေကတူတူသုံးလို့မရပေမယ့် တချို့အခါတွေမှာတော့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်တာတွေရှိပေမယ့် တူတူသုံးရတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခါတွေမှာ ဆရာဝန်ကပမာဏပြောင်းပေးတာမျိုး၊ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာတွေကိုပြောပြတာမျိုး လ ုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်းသည့်ဆေးဖြစ်စေ၊ မိမိဖာသာမှီဝဲနေသည့်ဆေးဖြစ်စေ ဆေးအကုန်လုံးအကြောင်း ပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့တော့ Celecoxib ကိုတူတူတွဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ကဒီဆေးတွေထဲကတစ်မျိုးမျိုးသုံးနေရရင် ဆရာဝန်က တခြားဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့ Celecoxib ကိုတူတူတွဲမသုံးရပါဘူး။ တကယ်လို့ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးသောက်ရဖို့အခြေအနေဖြစ်လာရင် ပမာဏပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်လိုသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့တွဲသုံးရင်တော့ တချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးသုံးတာက အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးညွှန်းရင် ဆေးပမာဏပြောင်းလဲတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်လိုသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Celecoxib ဟာ အစားအစာတချို့၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဆာလဖာဓါတ်မတည့်လျှင် ( ဥပမာ- sulfamethoxazole, Bactrim®, or Septra)
နှလုံးခွဲစိတ်ဖူးလျှင် – ခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင်၊ ခွဲစိတ်မှုပြီး မသောက်သင့်ပါဘူး
CYP2C9 နည်းခြင်းကဲ့သို့ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ
အသည်းရောဂါ – ဆေးစွန့်ထုတ်မှု နှေးသွားနိုင်တာကြောင့်သတိနဲ့သုံးသင့်ပါတယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Usual Adult Celecoxib Dose for Pain:
Usual Adult Celecoxib Dose for Dysmenorrhea:
Usual Adult Celecoxib Dose for Osteoarthritis:
Usual Adult Celecoxib Dose for Rheumatoid Arthritis:
ကလေးတွေအတွက် Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Celecoxib (စီလီကိုဆစ်ဘ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးတောင့်သောက်ဆေး-50mg, 100mg, 200mg, 400mg
အန်ခြင်း (ေ သွးရောင်၊ အမည်းရောင်)
မျက်လုံး၊ မျက်နှာ၊ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လည်ချောင်း၊ လက်မောင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ ခြေကျင်းဝတ် များရောင်ခြင်း၊ ဖောခြင်း
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 27, 2017
အဆစ်ရောင်ခြင်း ကို သက်သာစေမယ့် အစားအသောက် ၈မျိုး
ဆေးညွှန်းမလိုဘဲ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်ယူလို ရသော ဝမ်းလျှောပျောက်ဆေးများ